Safaya Tsvimbo - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 6 Products for Safaya Tsvimbo)
Yakakwira mhando Sapphire Rod
Realpoo Optics inogona tsika yakagadzirwa nesafiri tsvimbo, ndapota ipa kudhirowa kana kudomwa kuti uwane chitaurwa. Magadzirirwo: Chinyorwa: Sapphire AI2O3 Dhayamita: 2-300mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.02mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20, 20/10 Kudzidziswa kweAxis: Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi...
Optical Hafu Girazi Tsvimbo
Realpoo Optics inopa tsika tsvimbo. Ndokumbira upe kudhirowa kuti uwane chitaurwa. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5-300mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20 Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
Optical Glass Square girazi tsvimbo
Yakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masisitimu. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 0.5mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20 Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
Kureba 592mm Optical girazi Fused Silica tsvimbo
Yakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masisitimu. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20 Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
Optical girazi rakanamatira tsvimbo
Iwo akasungirirwa matanda anonamira matanda ane mawindo ewindows. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20 Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
Safaya Tsvimbo Square Tsvimbo Sapphire Tsvimbo Quartz Tsvimbo Sapphire Kupedza Tsvimbo Safaya Kupa Optical tsvimbo Girazi Fibhi Tsvimbo